Ampidino ComboFix 17.10.14.1 ho an'ny Windows
Sehatra: Windows Version: 17.10.14.1 Fiteny: English
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (5.40 MB)
Miaraka aminny ComboFix dia afaka manadio viriosy ianao raha tsy mandeha ny rindrambaiko antivirus. ComboFix dia rindrambaiko fanesorana virus maimaim-poana izay azonao ampiasaina raha notafihanny malware toy ny virus, trojan, rootkit, adware, spyware, malware ary ny solosainao. ny rindrambaiko antivirus anao dia tsy mahafeno ny filanao hanalana ireo rindrambaiko mampidi-doza ireo.
Ny Combagaga dia afaka manaisotra ireo viriosy misy kofehy izay manelingelina ny fomba fiasanny solosainao, toy ny amvo.exe. ComboFix dia rindrambaiko novolavolaina hanintonana mpampiasa solosaina sy teknisianina mandroso kokoa. Afaka miditra aminny faritra rehetra aminny solosainao ny rindrambaiko ary afaka manadihady lalina ny rafitrao aminny fomba tsy vitanny rindrambaiko antivirus.Noho io antony io dia ampirisihina ianao hampijanona ny rindrambaiko antivirus anao ary tsy hanao programa any aoriana rehefa mampiasa ilay rindrambaiko.
Ho fanampinizany, ny rindrambaiko dia mamerina ho azy ny solosainao aorianny fizahana azy, noho izany dia mamporisika anao izahay hitahiry ny fifanakalozana ataonao eo am-pitantanana ny ComboFix. ComboFix dia manana endrika fanadiovana viriosy USB ary koa afaka manadio malware izay manelingelina ny fiasanny solosainao ary manova ny toerana fitetezanao. Miaraka aminny ComboFix, azonao atao ihany koa ny mamerina ny tehinao USB izay nanjary tsy azo ampiasaina aminny virus Autorun.
Aminizany fomba izany dia azo averina aminny toerany taloha ny kapila sy kapila ivelany. Combcoin afaka manadio virus amvo manova ny firafitry ny folder-nao. Amvo.Combagaga, iray aminireo rindrambaiko vitsy azonao ampiasaina aminny fanesorana viriosy exe, dia afaka mahita virus amvo.exe mora foana ary manolotra vahaolana fanesorana amvo miorim-paka aminny famafana maharitra ny ComboFix, tsy mamporisika anao hampiasa ComboFix ho toy ny lozisialy antivirus mijoro; Satria ny rindrambaiko dia fitaovana fanalana virus izay tsy azo ampiasaina raha tsy ilaina izany.
Ity fitaovana ity, izay tsy manome fiarovana araky ny fotoana mety ho anny solo-sainanao, dia tsy manakana ny viriosy hiditra ao aminny solo-sainanao fa manampy aminny fanesorana ireo viriosy niditra an-tsokosoko ao aminny solo-sainanao fotsiny izany ary tsy afaka miatrika. Taorianny ComboFix nanao scanning virus sy ny asa fanadiovana dia nitatitra ireo virus voamarina sy nanadio tao anaty rakitra.Ny Combagaga dia azo raisina ho toy ny kitapo fanampiana voalohany raha tsy mahazo valiny avy aminny fomba fanalana virus mahazatra toy ny antivirus. Ny tena tanjonny rindrambaiko dia ny mamantatra ireo viriosy izay tsy afaka esorina aminny fomba mahazatra ary hanafoanana ireo viriosy hita ireo aminny fomba hafa.
Aminizany no ahafahanao mamerina ny solo-sainao, izay manana olana noho ny viriosy eo am-perinasa, aminny fiasa mahazatra azy miaraka aminny fanampianny Comb maman ary afaka manohy mampiasa ny solosainanao tsy misy olana ianao. Rehefa ampiasaina tsy am-piheverana ilay rindrambaiko dia mety hiteraka fianjeranny rafitrao io.Hanana fampahalalana misimisy kokoa momba ny fampiasana ComboFix, azonao atao ny manamarina ny hoe Inona no atao hoe ComboFix, Ahoana ny fampiasana azy.Alohanny hampiharana aminny lozisialy Combagaga aminny orinasanny fanalana virus, dia tokony hanamarina programa fiarovana hafa aminny tranokalanay ianao; Na izany aza, rehefa tsy mifanaraka aminny zavatra ilainao ireo programa ireo dia mamporisika anao izahay hijery ny ComboFix.
Haben'ny rakitra: 5.40 MB
Fanavaozana farany: 03-04-2021